Sustainability: zvigadzirwa zvinoita kuti uchengetedze simba nemvura | Green Renewables
Isaac | 22/04/2022 14:53 | Simba rekuchengetedza, Kumba Economics
El kuchengetedza simba uye kuchengetedza mvura Iwo akakosha kudzikamisa mhedzisiro yekushanduka kwemamiriro ekunze, kuchengetedza nzvimbo dzemvura yakachena, uye kusiya nyika iri nani kune zvizvarwa zvinotevera. Kana vezvematongerwo enyika vasingaiti chinhu, kutaura chete, unogona kuita chimwe chinhu. Uye kana munhu wese akaita chimwe chinhu, kusaita kweavo vanotonga hakuna basa. Naizvozvo, pano ini ndinopa zvimwe zvezvigadzirwa zvinokubatsira zvakanyanya kuchengetedza mumba mako. Kwete chete iwe uchave uine diki tsoka, iwe uchaona zvakare kuti magetsi ako nemvura mabhiri anove akachipa sei, uye kunyange kutora mukana wezvinhu zvawakangorasa kare.
1 chengetedza mvura mukugeza
2 Kuchengeta mvura mudhishi/chimbuzi
3 chengetedza mvura mudhishi
4 Chengetedza mvura mumadiridziro egadheni
5 Tora mukana wemvura yegrey
6 Kanganwa mabhodhoro emvura yemamineral
7 tora mvura kubva mumhepo
8 Kompositi organic zvinhu kugadzira compost
9 kuchengetedza magetsi
10 Kuchengeta mumhepo inofefetera
11 Usakanda mafuta anosvibisa, gadzira sipo
12 Usatambise chikafu, vacuum pack
13 Iti kwete kune imwechete-kushandisa kofi pods
14 Dzivisa kushandisa gasi kune hita yemvura
15 Gadzira simba rako pachako
16 Kuchengetedza mvura yekuzadza dziva nekupupuma
17 Idya ECO, nokuda kwehutano hwako uye nokuda kwezvakanaka zvepasi
18 Famba-famba muguta pasina zvinobuda
chengetedza mvura mukugeza
Sarudza imwe kuponesa musoro wekugeza yemvura, iyo inounza mabhubhu emhepo uye inokwanisa kuwedzera kudzvanywa kwemvura uye huwandu hwayo pasina kushandisa yakawanda. Heano mamwe mazano:
Kuchengeta mvura mudhishi/chimbuzi
Kuregererei kutora mukana wemvura kugeza maoko ako, chiso, kana kuti kugeza muromo wako kuti uzadze mugodhi? Kana shandisa pombi inochengetedza imwe-lever...
Wirquin 50720090 Sanganisa...
chengetedza mvura mudhishi
uye ita zvakafanana mukicheni sink, uye yeuka kuti dhishi rinoshanda rinogara riri nani pane kugeza ndiro nemaoko ... uye zvakanyanya kugadzikana!
Roca Targa - pombi...
Chengetedza mvura mumadiridziro egadheni
Zvirimwa zvichakutendai nekudiridza, asi usashandise donhwe rimwe zvaro zvezvinodikanwa. Vanoda mvura nguva dzose, kwete izvozvi...
Sonkir pH mita ye ...
Tora mukana wemvura yegrey
Kuti uwane shandisa mvura yegreyKana iwe uchigara muimba yenyika kana chalet, unogona kuisa mushonga wekurapa kuti ugone kushandisa mvura iyi kudiridza uye zvimwe zvinodiwa. Kuti uite izvi, tenga mushonga wekuchenesa tsvina yeimba yako.
Kanganwa mabhodhoro emvura yemamineral
Usatenga mabhodhoro emvura yemaminerari asina kungoita epurasitiki chete, asiwo ane yakakwirira CO2 tsoka, nokuti inosanganisira kutakura mvura kubva kune imwe nzvimbo kusvika pakutengesa. Shandisa a reverse osmosis system kunwa mvura yemupombi ine utano.
tora mvura kubva mumhepo
Wakanga uchiziva here kuti unokwanisa kuwana marita emvura kubva mumhepo? Uye kwete izvozvo chete, tora mukana wesimba kudzikisa humidify makamuri, kudzivirira mold, fungus kuwanda, kuparara kwezvinhu, hunyoro mumadziro uye sirin'i, kudzivirira matambudziko emajoini nekuda kwehunyoro, matambudziko ekufema, nezvimwe. Nemvura yakawanikwa unogona kudiridza zvirimwa.
Kompositi organic zvinhu kugadzira compost
Nguva zhinji matehwe emazai, makomba ekofi, matehwe emichero, uye kunyange zvimwe zvinhu zvakadai semashizha akaoma, mashizha kana kuchekerera zvinosara zvinoraswa. Asi zvose izvi zvinogona kuva shandura kuita fetereza yakakwana yebindu rako nemapoto.
Skaza Inodarika ...
Pamusoro pekubvisa machaja ese kubva kunharembozha, kudzima zvausiri kushandisa, uye kudimbura midziyo pane yakamira-nekuchengetedza, unogona zvakare kushandisa. magirobhu akangwara, mapulagi anodimbura otomatiki, Etc.
Mwenje we LED Wall...
Bosch Smart Imba ...
Aigostar -10 x Bulb... Ona maficha 791 Ongororo Tenga izvozvi
Aigostar -8W LED girobhu... Ona maficha 2.392 Ongororo Tenga izvozvi
EXTRASTAR 12W Chiedza... Ona maficha 656 Ongororo Tenga izvozvi
Zvakanakisa	Aigostar -10 x Bulb...
Unhu hwemutengo	Aigostar -8W LED girobhu...
Chatinoda	EXTRASTAR 12W Chiedza...
Kuchengeta mumhepo inofefetera
Imwe huru mashandisirwo esimba mumba kazhinji ndeye air conditioning system, ingave iri air conditioning kana kudziyisa. Kuti uchengetedze, unogona kushandisa smart thermostats, pamwe nekuvandudza insulation yeimba yako.
Kudzora Kwemamiriro ekunze ...
tado ° Misoro ...
Google Nest Kudzidza ...
Weather Stripping Doors 12M Strip... Ona maficha 932 Ongororo Tenga izvozvi
HOOMEE Adjustable Insulator... Ona maficha 1.390 Ongororo Tenga izvozvi
HOOMEE Fabric Cover... Ona maficha 18.358 Ongororo Tenga izvozvi
Zvakanakisa	Weather Stripping Doors 12M Strip...
Unhu hwemutengo	HOOMEE Adjustable Insulator...
Chatinoda	HOOMEE Fabric Cover...
Usakanda mafuta anosvibisa, gadzira sipo
Nemafuta aunorasa mukicheni uye necaustic soda unogona kugadzira Sipo yekuzvigadzirira, nokudaro kutora mukana werudzi urwu rwemafuta anogona kusvibisa zvakanyanya.
Sipo Mucheki DIY...
Usatambise chikafu, vacuum pack
Usatambise chikafu. Gore negore matani ezvokudya anoraswa, nepo vamwe vakawanda vachifa nenzara. Tora mukana pane zvasara uye chengetedza chikafu chako zvirinani.
AEG AVFK1+ | Pakiti 3...
Kurongedza bhegi rine embossed...
Vacuum Seler ...
Iti kwete kune imwechete-kushandisa kofi pods
Kofi capsules inodhura zvakanyanya pane kutenga yakazara kana pasi kofi. Zvakare, kushandisa macapsules aya kunoreva kurasa matani epurasitiki nealuminium kubva mumakapisi akatoshandiswa. Kuti urege kupa kune izvi, kana iwe uchitova nekapule kofi muchina, unogona kushandisa reusable capsules uye isa kofi kana infusion yaunoda.
uye Cafilas Capsule...
ini Cafilas Dolce Gusto ...
Dzivisa kushandisa gasi kune hita yemvura
Kwete Putin kana Algeria, rega kushandisa gasi mumvura inopisa yekugeza nemagetsi. Kwete chete iwe unodzivirira kupisa, asi iwe unodzivirirawo kutakura magasi egasi (kana iwe usina gasi reguta).
Tenga izvozvi Ona maficha
Gadzira simba rako pachako
Kana kushandisa biomass zvaunogadzira, zvakaita semashizha akaoma, mateko enzungu, kuchekerera huni, nezvimwewo, kuti uzvidziye, kana kushandisa. solar panels kugadzira magetsi kubva kuzuva...
Kuchengetedza mvura yekuzadza dziva nekupupuma
Muzhizha, nekupisa, mvura yakawanda inoputika kubva padziva. Kana zvakadaro, unogona chengetedza marita akawanda mumwaka wezhizha nekusazadza dziva zvakanyanya nekuda kwezvigadzirwa izvi zvinotokubatsira kuvhara kuvuza:
Dziva System Dziviriro...
AQUA MIRA KUBVISA
Idya ECO, nokuda kwehutano hwako uye nokuda kwezvakanaka zvepasi
Zvechokwadi, tarisa kudya kwako. Idya zvine hutano, chengetedza muviri wako usina chepfu uye kubatsira kudzivisa kusvibisa matsime emvura, nzizi, uye ivhu rinoparadza zvirimwa.
Unonyora sei thesis:... Ona maficha 146 Ongororo Tenga izvozvi
Nzira yekufamba ne... Ona maficha 49 Ongororo Tenga izvozvi
Masefa akafuratira e... Ona maficha 6 Ongororo Tenga izvozvi
Zvakanakisa	Unonyora sei thesis:...
Unhu hwemutengo	Nzira yekufamba ne...
Chatinoda	Masefa akafuratira e...
Famba-famba muguta pasina zvinobuda
Tsvaga a motokari isina kubuda kana nzira dzekufambisa paunofamba-famba neguta uye usashandise mota kana mudhudhudhu.
Ngano EBIKES ETNA Smart...
F.lli Schiano E- Mwedzi ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Simba rekuchengetedza » Sustainability: zvigadzirwa zvekuchengetedza simba, mvura uye zvigadzirwa
Chii chinonzi national park